Vondrona Afrikanina : LANY HO FILOHA VAOVAO ALPHA CONDÉ -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona Afrikanina : LANY HO FILOHA VAOVAO ALPHA CONDÉ
31/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanomboka omaly ary aharitra roa andro any Addis-Abeba, Ethiopie ny fivoriana an-tampony faha-28n’ ny vondrona Afrikanina. Marihina fa firenena afrikanina miisa 54 no mivondrona ao anatin’ity vondrona ity. Ary amin’ny maha-pikambana an’i Madagasikara ao anatin’izany vondrona izany moa dia miatrika izany any an-toerana ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, hotronon’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Attalah Béatrice sy ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Andriamosarisoa Jean Anicet. Marobe ny tombontsoa azon’I Madagasikara ao anatin’ny vondrona afrikanina. Fivoriana ahitam-bokatsoa ity hatao any Ethiopie ity. Ho an’ny omaly manokana, nibahan-toerana nandritra ny lahadinika ny fifidianana ireo mpitarika ny vaomieran’ny vondrona afrikanina. Tsiahivina fa efa tamin’ny fivoriana faha-27 notanterahina tany Kigali farany teo no efa natao ity fifidianana ity fa tsy nisy ireo nahazo vato roa ampahatelony nilaina ireo kandida tamin’izany. Raha telo ireo nilatsaka hofidiana tamin’izany fotoana izany, tafakatra dimy kosa izy ireo tamin’ity, ka telo lehilahy dia roa vehivavy. Ary lany ho filohan’ny Vondrona Afrikanina i Alpha Condé filohampirenena Guineanina ary i Moussa Faki Mahamat kosa no lany ho filohan’ny kaomisiona Vondrona Afrikanina.
Ankoatra ny fifidianana ny filoha vaovaon’ny vaomiera afrikanina dia nodinihina nandritra ny lahadinika ihany koa ny fiverenan’ny firenena Maroc indray ao anatin’ny vondrona, raha efa niala ho tsy mpikambana intsony tao anatin’ny 33 taona lasa izay. Raha tsiahivina hatrany, noho ny fikasany hanangana fanjakana islamika taty amin’ny kaontinanta Afrikanina tamin’izany andro izany. Fa ankoatra ny fampandrosoana ny kaontinanta Afrikanina kosa dia hodinihina mandritra ity roa andro ity koa ireo olana ara-pôlitika, tsy filaminana aty Afrika toa ny mitranga any amin’ny Repoblikan’i Congo, Soudan Atsimo, Mali. Tsy maintsy hijery ny fanavaozana ny fomba fitantanana ihany koa ny vondrona afrikanina mba hahomby kokoa amin’ny fandaniana sy fampandrosoana ny Afrika. Ity vondrona ity izay nahazo tsikera matetika amin’ny tsy fahombiazana amin’ny fomba fiasa. Tafiditra amin’izany ny fanavaozana ireo rafitry ny vondrona afrikanina izay ezahina hampifanarahana ny toe-java-misy ankehitriny, toa ny fiatrehana ny olana misy ary ny fampiarahana ny fampanajana ny demokrasia sy ny zon’ny olombelona aty Afrika.